Sitsalele umnxeba: +86 15553251378
umbhobho wekhabhoni ongenamthungo
umbhobho wealloyi ongenamthungo
umbhobho wensimbi engenasici
Mysteel Macro Weekly: Ulawulo lukaRhulumente lugxininise imfuno yokuthotywa kwamaxabiso ukunceda amashishini ukumelana nokunyuka kwamaxabiso ezinto ezikrwada.
Ixesha lokuposa: 11-30-2021
Ihlaziywa rhoqo ngeCawe phambi kwentsimbi yesi-8:00 kusasa ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo weentshukumo ezinkulu zeveki. Isishwankathelo seveki: Iindaba zeMacro: U-Li Keqiang kwintlanganiso yesigqeba seBhunga lase-China ugxininise isidingo sokuqinisa ukulawulwa kwe-cross-cyclical; U-Li Keqiang kutyelelo oluya eShanghai ugxininise imfuno yokubandakanya...Funda ngokugqithisileyo »
I-Mysteel Macro yeVeki: INANI LEZOQOQOSHO ZILANDE NGO-OKTOBHA, inkqubo yentsimbi yekhabhoni yentsimbi iya kwaziswa.
Ixesha lokuposa: 11-25-2021
Iveki kuMfanekiso Omkhulu: UMongameli Xi Jinping ubambe inkomfa yevidiyo kunye noMongameli wase-US uBiden; idatha engundoqo yezoqoqosho evela e-China ekhutshwe ngo-Okthobha ibonise imveliso yemizi-mveliso edlulayo ekulindelekileyo, ukukhula kotyalo-mali kuqhubeka nokucotha, kunye nokuthatha idatha yokusetyenziswa; Ishishini lentsimbi yaseTshayina carb...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 09-06-2021
Iindaba eziziintloko: IKomishoni yoHlaziyo eyiNtloko ithembisa ukukhulisa oovimba bempahla yorhwebo kunye nolawulo; iintetho zeseshoni yesiqhelo malunga neemveliso; U-Li Keqiang ucela ukuguqulwa kwamandla; Ukwandiswa kwemveliso yezizwe ngezizwe kuyehla ngo-Agasti; Iintlawulo ezihlawulwayo ezingezizo ezefama zehle kakhulu kunoko bezilindelwe ngo-Agasti kwaye ndi...Funda ngokugqithisileyo »
Iindaba zamva nje ngamaxabiso entsimbi kule veki
Ixesha lokuposa: 08-26-2021
1. I-macroscopically, kwisiqingatha sesibini sonyaka, uxinzelelo oluhlayo kuqoqosho lwasekhaya lwanda, uqoqosho lwezoshishino lwabonisa ubuthathaka bokubonelela kunye nemfuno, i-real estate market yaphola, utyalo-mali kwiziseko zophuhliso lwalubuthathaka, utyalo-mali endodeni. ...Funda ngokugqithisileyo »
Imiyalezo ephambili yoshishino lwentsimbi
Ixesha lokuposa: 03-19-2021
1. Ukunyaniseka kusembindini woshishino lwentsimbi. Akukho nto ibaluleke ngaphezu kwentlalo-ntle yabantu bethu nempilo yendawo esingqongileyo. Naphi na apho sisebenze khona, sityale imali kwikamva kwaye sizame ukwakha ilizwe elizinzileyo. Sivumela uluntu ukuba lu...Funda ngokugqithisileyo »
Ngaba ubuyilindele intshukumo yentsimbi ye-32% yase-US?
NgoMvulo kusasa nge-1 kaMatshi, uMike Paulenoff walumkisa amalungu eMPTrader malunga nokunyuka okunokwenzeka e-US Steel (X): "Ukuba isicwangciso seziseko ezingundoqo siyenzeka kwangethuba kuLawulo lweBiden, kwaye ukuba i-440% inyuke ukusuka ngoMatshi ka-2020 ukuya kuthi ga ngoku. uJanuwari ka-2021 ophezulu akazange adideke...Funda ngokugqithisileyo »
Ifowuni: +86 15553251378
© Copyright - 2011-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.
Ansi B16.5 Flange Flange, ICarbon Flange, I-Stainless Steel Plate Flange, I-Flange eyenziwe, Ansi Plate Flange, Slip-On Flange,